Vaovao - Ny mahasamihafa ny akanjo ba sy akanjo ba
Ny mahasamihafa ny akanjo ba sy ny akanjo ba
Mifanaraka amin'izany, ny akanjo ba dia akanjo ba ba nataony. Knitwear dia hevitra lehibe kokoa. Ny akanjo ba akanjo dia azo zaraina ho akanjo ba vita amin'ny landihazo sy akanjo volon'ondry, ary ny akanjo ba akanjo an'ny volon'ondry. Ireo akanjo ba ba nataony izay matetika no resahintsika matetika dia manondro ireo lamba voatenona tenona amin'ny alàlan'ny fitaovana fanenomana. Tena ambonin-tendrombohitra ny velarana ary akanjo ba ba nataony volon'ondry amin'ny resaka fomba fanodinana dia tsy mitovy, akanjo ba vita amin'ny landihazo vita amin'ny landihazo amin'ny famokarana teknolojia fanapahana sy fanjairana. Ny volony akanjo ba ba nataony. Ny lamba dia voatenona amin'ny alàlan'ny kapila fanjairana. Ny akanjo ba no resahina matetika dia ny akanjo lava voarary kofehy volon'ondry, ary ny akanjo ba ba nataony dia fiheverana tena mahay momba ny asa-tanana. Amin'ny ankapobeny, ny atin'akanjo, akanjo fanatanjahan-tena vita amin'ny landihazo, ba kiraro, sns.
Ny akanjo baoty dia matetika manan-karena amin'ny drape sy ny vatan'ny vatana. Tao anatin'izay taona faramparany, ny fifangaroan'ny kardinaly malaza vita amin'ny knit dia tena mety amin'ny zazavavy kely. Misafidiana akanjo ba ba nataony miloko marevaka miaraka amin'ny akanjo fohy sy leggings miloko vatomamy misy baoty Martin. Akanjo tena mahafatifaty, ny zipo amin'ny akanjo tsy tokony ho ela loatra. Amin'ny toetr'andro mangatsiaka, safidy tsara koa ny misafidy baoty oram-panala miforitra. Io fampifangaroana io dia lamaody, vaovao, mahatsikaiky ary mahafatifaty.
Ny fahatsapana malalaka sy tsy mahazatra an'ny akanjo ba ba nataony, toy ny palitao, dia afaka mampiseho tsara indrindra ny fomba eropeana sy amerikana. Raha mitafy tampoka manify ianao, dia hampamoa-bava ny fohy ny denim fohy. Ny stockings volontsôkôlà sy palitao baoty misy zipo dia mahatonga anao ho tsara tarehy sy feno hatsarana. Ny vokatry ny akanjo ba vita amin'ny fatotra akaiky dia mety hahatonga ny tratranao sy ny valahanao ho feno kokoa, fa ny stockings mainty kosa dia mihinjitra sy mampihena ny tsipika tongotrao. Ny hatsaran'ny vehivavy no tena nasongadina. Raha manao palitao baoty ianao dia tsy dia mety loatra amin'ny hazandrano ba nataony mavesatra. Ankehitriny misy fehiloha kely efajoro voafatotra amin'ny vozony, izay lamaody sy malala-tanana.